Posted By: KongoLisolowaa: Nofeembar 2, 2018 15: 45 No Comments
Boqortooyada Sultan ee hooyada madow iyo dareenkeeda shakhsi ahaaneed oo u dhow Métis iyo Black waxay ku tilmaamaysaa awoodda boqortooyada Morocco.
Ismaaciil iyo madow
Maqaal cusub oo ku saabsan maqaaladayada taxanaha ah ee ku saabsan ka qayb qaadashada madow ee weynaanta Morocco. Ma ahan mid ku filan in la siiyo Morocco casriga ah ee aasaasiga ah, qayb ka mid ah dhismaha iyo alaabada dharka, waa in sidoo kale la ogaadaa in madowayaashu ay sidoo kale soo bandhigeen boqoradooda ugu weyn, Moulay Ismaïl.
Wuxuu ku dhashay 1645, Ismail waa wiilkii Chérif Ben Ali, oo ah aasaasihii hantida Alawite, oo maanta ah madaxa Morocco oo sheeganaya in uu ka soo degay Nabiga Maxamed.
Sida walaalkiis iyo kuwii hore u doortay Moulay Rachid, Ismail waa wiilka madow. Inkasta oo uu lahaa jilayaal badan oo 500 ah iyo kun carruur ah intii uu noolaa, sidaas darteedna uu ku nool yahay magaca aabaha ee ugu badan ee caruurta ku jira Records World Records, xaaskiisa kowaad wuxuu ahaa haween madow Layla Aïcha oo lagu magacaabo "Sultane Zidane" oo tixraac ah wiilkeeda Moulay Zidane, oo ah wiilkii ugu jeclaa awaamiirta, taas oo ahayd mid ka badan 3 / 4 Negro-Afrika.
Sultane Zidane wuxuu saameyn weyn ku yeeshay Ismaaciil, kaasoo ka yaabiyay dadka reer Yurub ee nasiib u siiyey Morocco. Ismaïl xidhiidhkii ugu weynaa ee Blacks wuxuu ahaa abuuritaanka ciidanka Cawil al Bukhaari ciidanku wuxuu ka kooban yahay 50 000 Blacks and mestizos oo uu u dhiibay kalsoonidiisa iyo masuuliyaddiisa saaran masuuliyadda amniga cadaanka boqortooyada.
Moulay Ismaïl waxaa loo tixgeliyaa taariikhyahanada sida Suldaankii ugu weynaa taariikhda Morocco iyo aasaasihii aaska ahaa ee hantida Alawite. Waxa uu ku guuleystay inuu baabi'iyo khatarta ah ee uu la tartamayo iyo inuu midoobo Morocco oo uu ku wado wadamada yurub, Ingiriis iyo Isbaanishanka boqortooyada.
Royal Palace of Meknes, oo loo dhisay Moulay Ismaïl Dhismaha weyn, wuxuu caasimadiisa ku dhistay Meknes, wuxuu lahaa dhismooyin waaweyn iyo qalcado la dhisay, isaga oo hoos yimaada Morocco oo leh sumcad caalami ah oo la mid ah Louis XIV ee Faransiiska.
Fikrad ah in Moroccans aysan ku faani karin maanta iyada oo aan hooyada madow ee nolosheeda u siisay Suldaankii, oo ka warramay isfahamkiisa, ayaa abuuray.
Mucjisooyinka, Muslimiinta ee Faarfalka Dhulka: Natiijooyinkaas waxaa lagu caddaynayaa ilaha reer Ismaaciil ee ku tilmaamaya aragtidoodii ugu horeysay ee muslimiinta Carbeed ee muslimiinta ah
Calaamadaha Afrikada Afraad ee Afrikaanka ah iyo Qiimaha ayaa ah mid deg deg ah xilliyadii dhaqanka Afrikaanka ah, oo ay afduubtay oo ay niyad jabiyeen dhaqanka reer Galbeedka, halis u ah